Sarri oo qarka u saaran in laga ceyriyo Chelsea….(Goorma???) – Gool FM
Sarri oo qarka u saaran in laga ceyriyo Chelsea….(Goorma???)
(London) 18 Maarso 2019. Maurizio Sarri ayaa qarka u saaran in laga ceyriyo Chelsea kaddib guul daradii 2-0 ay shalay kala kulmeen Everton taa oo mugdi wayn galisay rajadooda kaalinta afaraad.
Warar dhawaan gal ah ayaa tibaaxaya in macalinka reer Talyaani kooxda laga ceyrin karo waqtiga fasaxa kulamada caalamiga ah ‘international break’.
Suuqii xagaaga uun ayay Blues soo xero galisay Sarri markaa ay Napoli siisay 4.4 milyan oo bound, balse iminka waqtiga u harsan waa faro ku tiris sida uu warinayo Daily Express.
Chelsea ayaa ku dhibtooneysa sidii ay uga soo mid noqon lahayd afarta sare ee Premier League, xilli ciyaareedka ayaana ku dhammaan doona iyadoon wax koob ah qaadin haddii ay ku guuleysan waayaan Europe League oo ah koobka kaliya ay iminka u tartamayaan.
Sarri oo ciyaarta kaddib la waydiiyay sababta guul darada ayaa sheegay inuusan garaneyn waxa dhacay isla markaana ay ciyaartoyda xitaa aysan garaneyn waxa dhacay maadaama ay filanayeen inay goolal badan ku adkaan doonaan kaddib wacdarihii ay dhigeen qeybta hore ee kulanka.
Messi oo si wayn ugu mahad celiyay Taageerayaasha Real Kaddib markii ay u sameeyaan wax uusan weligii horey u arag